Ambohimasina : nanara-maso tany an-toerana ny komity (NewsMada) | AEMW
Ambohimasina : nanara-maso tany an-toerana ny komity (NewsMada)
Manodidina ilay raharaha fanodinkodinam-bola 198 tapitrisa Ar, tao amin’ny kaominina Ambohimasina, nandefa komity mpanara-maso ny faran’ny herinandro teo ny avy amin’ny tale mpanara-maso ny volam-panjakana, nijery ifotony zava-misy. “Manana komity mpanara-maso ny ato amin’ny minisitera rehefa misy ny olana eo amin’ny fitantanana ny vola. Tsy maintsy hamarinina raha tena tonga tany amin’ny kaominina tokoa ny vola nalefan’ny fanjakana, ary mitsangana ve ny foto-drafitrasa nilana izany vola izany”, hoy ny fanazavana azo. “Tsy misy idiran’ny minisitera ny fitantanam-bolan’ny kaominina, ary tsy azon’ny minisitera sintonina ihany koa izay vola efa lasa any”, hoy ny fanazavan’ny talen’ny fanarahamason’ny volam-panjakana, i Houssen Abdoulah, tamin’ny mpanao gazety.
Momba ny kaonty manokana nasian’ny kaominina ilay vola azony kosa, nilaza ity tale ity fa manan-jo amin’izay asiny azy ny kaominina, ary tokony ho any amin’ny orinasa mpanatanteraka ny asa izany. “Rehefa misy ny olana eo amin’ny kaominina, toy ny tsy fanatanterahana ny asa, fanodinkodinambola, manao ny fanarahamaso ny minisitera”, hoy izy. Nilaza ho tsy mahalala ny momba ilay vola 198 tapitrisa Ar nambara fa voahodina niampangana ny minisitra teo ny tenany, kanefa kosa manatanteraka ny fanadihadiana momba izany. “Hitanay porofo tamin’ny fidinana ifotony fa efa mitsangana ny fotodrafitrasa nampiasain’ny kaominina ny vola”, hoy izy. Nanamafy ny ben’ny tanàna Tsabo Pierre fa efa mijoro ny birao lehibe roa, ary volan’ny vondom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny nanamboarana izany.
Mifamahofaho ny raharaha, tmisy ny milaza fa tsy mitombina ny fiarovan-tenan’ny fanjakana manoloana izany. Efa nahazo ny tatitra rehetra momba azy io ny DG eo anivon’ny IGE sy ny primatiora ary koa ny eny anivon’ny fiadidiana ny Repoblika. Efa nahanjahanjan’ny haino aman-jery any ivelany : RFI sy ny TV5 ny fanodinkodinana niainga amin’iny fampiakarana ‘codis” ireo mpiasan’ny IGE telo. Nahoana no efa aty aorian’izany rehetra izany vao namaly sy niaro tena ny mpitondra amin’ny alalan’io tompon’andraikitra io ary nilaza fa tsy marina sy tsy mitombina avokoa ny tatitr’ireo mpiasan’ny IGE ? Tsy mazava.
Lasa nitsabo tena atsy La Réunion
Misy tetika handehanana lavitra kokoa manoloana izao fifampiarovana izao ka hikendrena ny hanolorana ho kandidà amin’ny fifidianana io tompon’andraikitra iray io, avy amin’ny alalan’ny fiombonambe misy azy.
Araka izany, andrasana ny tena marina momba ity raharaha ity. Tsy eto an-toerana rahateo ny praiminisitra fa lasa nitsabo tena atsy La Réunion, araka ny loharanom-baovao.
@dmin August 16, 2016 NewsMada No Comments
← Fitrandrahana ao Soamahamanina : mitohy ny fandraràna napetraky ny fanjakana (NewsMada)
Ambohipo : nilatsaka tampoka nandrava « revy » ny polisim-pirenena (NewsMada) →